Kooxda Manchester United oo ogolaatay qiimaha ay kula soo wareegayso Moussa Dembele – Gool FM
Kooxda Manchester United oo ogolaatay qiimaha ay kula soo wareegayso Moussa Dembele
(Manchester) 14 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay ogolaatay lacag dhan 62 milyan oo gini oo ay ku soo qaadanayso dhaliyaha Lyon ee Moussa Dembele.
Xiddiga reer France ayaa ku riyaaqay xilli ciyaareedka ugu fiican kooxda ka dheesha horyaalka Ligue 1 ka hor inta aan kal ciyaareedka la kansalin sababo la xiriira faafaha Coronavirus, Dembele ayaana shabaqa soo taabtay 16 jeer 27 kulan oo uu ciyaaray Lyon.
Chelsea ayaa sidoo kale si xooggan loola xiriirinayay inay la soo wareegeyso xiddigii hore ee Kooxda Celtic, laakiin Man United ayaa la fahamsan yahay inay ku guuleysatay loollanka saxiixa Dembele.
Xaqiiqdii, Warsidaha Todofichajes ayaa sheegaya in dalab 61.8 milyan oo gini ah ay aqbaleen kooxda Lyon, weeraryahankan ayaana isku diyaarinaya inuu u dhaqaaqo garoonka Old Trafford suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Inkastoo Lyon ay horay ugu adkeysatay in Dembele aan la iibin doonin, guuldarradooda ah inay hubisay inaysan ka soo muuqanaynin kubadda cagta Yurub xilli ciyaareedka soo socda ayaa la micno ah inay diyaar u yihiin inay lacag kaash ah ku helaan 23-sano jirkaan.
Dembele ayaa dhaliyay 42 gool 88 kulan oo uu u saftay Kooxdda Lyon tan iyo markii uu kaga soo biiray Naadiga Celtic sanadkii 2018-kii.